Phakathi houseplants, okuyinto emazweni angaphandle (ikakhulukazi imvula), bemthanda balimi-abalandeli ekhaya umsayipuresi, Croton futhi Syngonium. Ukunakekelwa ekhaya akudingi mzamo okuningi ngabo futhi ukudala izimo ezikhethekile, kodwa umqhele yabo enhle owaqalwa unyaka wonke kuyoba uyabukeka emehlweni kanye bazogcwalisa ikamelo umoya-mpilo.
Syngonium: ukunakekelwa ekhaya
Syngonium isitshalo zimila baseNingizimu Melika naseMelika Ephakathi. Lokhu umvini elikhula uyathandwa phakathi abatshali, hhayi kuphela ngoba amaqabunga ayo abe i ngemibala ethandekayo (kusuka luhlaza okotshani ukuze way ne dark emithanjeni oluhlaza), kodwa futhi ngenxa yezinguquko ukuma ishidi ngekukhula izitshalo. Ngakho, amahlamvu abasha ishanelwe Syngonium lokuqala, kodwa kamuva kokuba dissected ngasesinqeni futhi ehlanganisa iyizingxenye eziningana abahlukene. Ukuze ugcine ukuma amahlamvu ishanelwe, udinga phusha eziqongweni amahlumela amasha.
Njengoba okuqondene imivini bohlobo, Syngonium zidinga ukwesekwa ngenxa lezinti zalo singafinyelela ubude eyodwa nengxenye ngamamitha amabili. Kungenzeka futhi sikhule amabhodwe isitshalo ekumisweni noma ububanzi imbiza ongaphakeme ukuba Creeper stem travel kanye ebusweni bomhlaba.
Uma uthenge Syngonium, abanakekela ekhaya ukuba ihlelwe ngendlela yokuthi ukukhanyisa kwakwanele, ikakhulukazi ebusika, kodwa hhayi ngqo futhi udlulele. Ezimeni zokukhanya Syngonium kushiya zincipha ukulahlekelwa umbala. Lesi sitshalo akawuthandi amazinga aphakeme okushisa emoyeni elomile. Amazinga elikhulu for wakhe - 18-24 ° C. Kufanele ibekwe kude kwebhetri futhi wafutha njalo Syngonium. Uyabakhathalela ekhaya ngoba kuye, ukuze akuyona yisixakaxaka.
Croton: zonke imibala yasekwindla efasiteleni lakho
Futhi kusukela ezishisayo ashisayo yeNingizimu Melika beza kithi Croton. Uyabakhathalela ekhaya zalesi sitshalo kudinga ukunakwa okwanele futhi banakekele ukwenza kube unyaka wonke owayijabulela amahlamvu aluhlaza futhi umbala yokuqala amaqabunga.
amahlamvu Croton ungaba umbala kusuka luhlaza okotshani nophuzi othi njengegazi ezijulile. Kulokhu, umbala amahlamvu incike kungakhanyi ukukhanya kwezindaba Igumbi: Croton uthanda ukukhanya okukhulu, kodwa kufanele bavikelwe elangeni elishisa bhe.
Croton ukuthandwa umswakama, ngakho ukuthambisa avamile futhi uchichima spray - isimo kubalulekile ukuze khona ukhululekile zalesi sitshalo.
Cypress: Sanibonani waseCalifornia
Cypress isitshalo futhi ongowokuzalwa Melika. zinhlobo zasendle njengoba singafinyelela ubude obungamamitha 25 metres, kodwa yokutshala endlini kuhoxiswe izinhlobo yemifino ne fun egqamile green izinaliti esithambile.
Yiziphi izimo ezidingekayo ukuze izitshalo ezifana nomsayipuresi? Ukunakekelwa ekhaya kumele ibe ngendlela yekutsi kwaba ngokulinganisela efudumele, zinomswakama futhi ukukhanya okwanele. Lokhu nesitshalo sichuma endaweni penumbra. Cypress akesabi kubanda, kodwa akakubekezeleli ubusika esitofini bese efulethini ezisemadolobheni, ngakho ngalesi sikhathi kungcono ukuthuthela endaweni epholile futhi njalo olufuthwe.
Indlela kabusha Kalanchoe: amanye amathiphu
Igama ekwindla imibala zivumelana yinkimbinkimbi yabo futhi okwakhe
Yini iphupho ukuba adle ebuthongweni bakho na? dream incazelo
Edene Village El Borj 3 * (Tunisia, Mahdia): incazelo ehhotela, izilinganiso